BQ Ma sii deyn Doonto Telefoonada Magaceeda Asalka ah | Androidsis
Maanta waxaa taleefanada ugu horeeya ee Vingroup ay soo gasho Spain. Kuwa idinka mid ah oo aan xusuusan, shirkadan ka socota Vietnam ayaa heshay inta badan BQ dhawr bilood ka hor. Galabta ayaa taleefannada casriga ah ee ugu horreeya ee hoos yimaada astaanta cusub ee Vsmart. Soo bandhigiddan ka dib waxaa jiray shakiyo ku saabsan waxa dhici doona marka laga hadlayo magacyada sumadaha, laakiin waxaan leenahay caddeyn dheeri ah.
Lama oga in BQ ay joojineyso soo saarista taleefannada hoostooda.. In kasta oo tani ay ahayd wax la fahmi karo, haddana wax xaqiijin ah lagama hayn. In kasta oo shirkaddu mar hore soo saartay qoraal, halka ay sharraxaad dheeraad ah ka bixinayaan. Tuhunnadii aan qabnay ayaa la xaqiijiyay.
Taleefannada casriga ah ee BQ ayaa joojin doona inay gaaraan dukaamada. Dhammaan wax soo saarka cusub waxaa lagu fulin doonaa magaca cusub, oo aan awoodnay inaan ogaano maanta, Vsmart. In kasta oo shirkadda iyo summaddu sida oo kale ay sii jiri doonaan. In kastoo aysan sidaas ku sameyn doonin qeybta taleefanka gacanta.
Sidan oo kale, aalado kale ayaa sii wadi doona isticmaalka magaca BQ. Waxaan ka fikiri karnaa kuwa kale sida madbacado, kiniin ama daabacado 3D ah, kuwaas oo ah qaybo shirkaddu horey u joogtey. Xaaladdaada, calaamaddu way sii jiri doontaa sidii ay ahayd illaa hadda.
Telefoonada ay BQ soo bandhigtay ilaa hada waxay sii wadi doonaan in si caadi ah loo iibiyo, Meelaha caadiga ah ee iibka shirkadda. Marka kuwa isticmaala ee xiisaynaya way sii wadi karaan inay iibsadaan taleefannada nooca leh. Boggooda rasmiga ah waxay hadda sidoo kale u banneeyeen moodeellada cusub ee la imanaya sumadda Vsmart.
Waqti kala guur ahmiyad u leh astaanta. In kasta oo helitaanka Vingroup noqon karto badbaadiye. Marka la fiiriyo baaxadda shirkadda, waxaa suurtagal ah inay jiraan maalgashi ballaadhan oo BQ ah, oo ka caawin kara shirkadda inay sii waddo ama u ballaariso qaybo cusub. Laakiin taleefannadooda casriga ah ayaan mar dambe la imaan doonin magaca shirkadda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » BQ waxay ku dhawaaqeysaa inaysan jiri doonin mobiillo kale oo ka hooseeya astaanteeda
Browser Opera wuxuu isku darayaa VPN cusbooneysiintiisii ​​ugu dambeysay